Sina Manondraka voatavo afaka orinasa sy mpanamboatra | Honghui Glass
Tanky fitehirizana Silika avo lenta
Vazy azo entina
Vazy latabatra kely
Vazy fanao eropeana
Diffuser parfum boribory
Vary kely mitsangana voninkazo
Afaka manondraka voatavo
Tavoahangy aromatherapy 200 ml
Labozia mangarahara fitaratra kristaly
Tavoahangy soda tsy misy firaka 1000ml
500 ~ 1000ml tavoahangy menaka oliva maitso maitso tawny
RETRO DESIGN - Ity rano ity dia mety manana endrika volavola sy antitra izay afaka handravaka sy hamenoana ny zaridainanao.
PUMPKIN STYLE - mamolavola tompona miaraka amina endrika voatavo miloko samy hafa.
ADZUSTABLE NOZZLE - Ny fitrandrahana atomika tsara, ny nozatra azo ovaina, afaka manafotra zavona na tsipika mahitsy.
DESIGN LONG NOZZLE - Tonga miaraka amina plastika lava, izay ahafahanao manondraka zavamaniry kely mora kokoa.
FAMPIHARANA LEHIBE - Mety amin'ny filan'ny ankohonanao rehetra ao anatin'izany ny fanadiovana, ny fambolena, ny vokatra fanadiovana, ny menaka manitra, ny zavamaniry sy ny voninkazo, ny ravina manodinkodina ary ny varavarankely fanadiovana. ary fampiasana maro hafa.
PUMPKIN STYLE: Ity tavoahangy famafazana ity izay namboarina tamin'ny endrika voatavo mahafatifaty sy paompy ambony indrindra. Ny famolavolana noza lava miaraka amin'ny atomisation tsara, azonao atao ny manaparitaka zavona rano amin'ny press press.
MATERIASA MAHAY: vita amin'ny akora PP sy PET, maivana ary mateza, tsy mora vaky. Bara fanerena baraka fakana tahaka, endrika tsara tarehy, mora ampiasaina.
Mora ampiasaina: Ity tavoahangy famafazana ity dia manana mpihazona rantsan-tànana mety ary azo hamenoana mora foana amin'ny fanesorana ny tampony. Azonao atao ny manefy zavona rano amin'ny tsindry malefaka, mora ny mamafy zavamaniry kely kokoa.
FAMPIHARANA LEHIBE: Mety tsara amin'ny fanondrahana zavamaniry anaty trano, toy ny zava-maniry mahavokatra, hantsana, orkide, zavamaniry an'habakabaka, tsara ihany koa ho an'ny filan'ny ankohonanao ao anatin'izany ny fanadiovana, taovolo, sns. Mety amin'ny trano, birao, trano fandraisam-bahiny na matihanina voninkazo.
Zavamaniry fanondrahana fahagola Zavamaniry fambolena voninkazo fitifirana famafazana fitaovana fanamboarana fitaovam-pitaterana tarehy azo havaozina tavoahangy kosmetika fitaovana fitsangatsanganana Mini Plants Flowers Garden spray tavoahangin-javamaniry zaridaina manondraka afaka.
Endrika voatavo mahafatifaty, kely sy maivana, azonao atao ny manaparitaka zavona, Manondraka voninkazo ary manondraka zavamaniry hanatsara ny fiainana.
Ny famolavolana hydraulic hydraulic kettle, mora ampiasaina tsotra. Retro fakantsary faneriterena baraka, fisehoana tsara tarehy, mora ampiasaina, tsindry rano Press, spray tsara, tsy ho be loatra ny rano, afaka manitsy ny tsindry rano izy, mora ampiasaina ary mety.
Mety amin'ny fanondrahana zavamaniry kely ao an-tranonao sy ny biraonao. Mahafatifaty Retro endrika voatavo fitetezana rano fandroana voninkazo tavoahangy voninkazo zaridaina fanerena tsindry zavamaniry voninkazo zaridaina fitaratra Retro voatavo endrika sprayer manondraka poti-tanana tsindry sprayer voninkazo.
Previous: Vazo Origami
Manaraka: Kitapo fampidirana sofina na tavoahangy
Vazy voninkazo fitaratra
Haingo vita amin'ny vazy
Vata fitaratra lehibe
Vata fitaratra avo
Kitapo fampidirana sofina na tavoahangy
Xuzhou Honghui Glass Products Co., Ltd. dia mandray ny mpanjifa eran'izao tontolo izao, manantena ny ho tonga mpiara-miombon'antoka azo antoka ianao!
Junsheng Plaza 3-1202, Distrikan'i Gulou, Xuzhou, Jiangsu, Sina
Tavoahangy fitaratra azo ampiasaina
Fantatrao ve? Misy karazana glasy maro ...
Hainao ve ny manao tavoahangy fitaratra？